निर्वाचन बहस : काँग्रेस–एमाले एकमत, प्रचण्ड–माधवमाथि नैतिक प्रश्न ! | Ratopati
तीन वटै चुनाव एकैपटक कति व्यवहारिक ?
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ७, २०७८ chat_bubble_outline0
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र आगामी तीन तहको निर्वाचनबारे तीन वटा विकल्पमाथि भइरहेको छलफलले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । स्थानीय तह,प्रदेश र संघको चुनाव अगाडि–पछाडि गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा फरक फरक मत छ । सत्तासीन नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएको अवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्थानीय तहभन्दा अगाडि हुनुपर्ने सत्ता घटक माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडान छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा उनीहरुले संविधानको व्याख्या पनि आ-आफ्नो अनुकुल गरिरहेका छन् ।
आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदै छ । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार जेष्ठको पाँच गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । ‘कुनै पनि रुपमा त्यसलाई पछाडि धकेल्ने वा सार्ने काम गर्नु हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको कुरा यही हो । उहाँ यसमा सकारात्मक र अडिग हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
संसद विघटन गरी ओलीले पुस ५ र जेष्ठ ७ मा निर्वाचन घोषणा गर्दा प्रतिगामी करार गर्नेहरुको अग्रमोर्चामा प्रचण्ड र माधव नेपाल नै थिए । यतिबेला उनीहरु आफू अनुकूलको चुनावी परिणामको आशमा ओलीको पथमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई डोर्याउन उद्यत देखिएका छन् । त्यसका लागि पनि प्रतिनिधिसभाभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलमा सहमति हुन जरुरी हुन्छ ।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर अगाडि गर्न उपयुक्त हुने नेता लेखकको भनाइ छ ।
तीन वटैचुनाव एकै पटक कति व्यवहारिक ?
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र प्रतिपक्षी दलका बीचमा सहमति भएमात्र वैशाखभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्भव हुने लेखकले बताए ।
१०-१५ को ग्याप राखेर क्रमशः प्रतिनिधिसभा,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भने गर्न सकिने उनले बताए । सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर राजनीतिक रुपमा औचित्यपूर्ण हुने गरी चुनाव जाने कुरामा काँग्रेस तयार रहेको लेखकको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा र कानुनी प्रवन्ध मिलेन भन्ने उहाँहरुले ब्याख्या गरिराख्नु भएको छ । संविधान उल्लंघन गर्न पाइदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । सबै दल मिल्दैमा कानुन र संविधान मिच्न मिल्छ र ?,’ उनको प्रश्न छ ।
सर्वोच्च अदाललते एक दिन मात्र बाँकी रहे पनि प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउन पर्छ व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले पुस पाँचमा गरेको संसद विघटनलाई संविधान विपरीत भनि गरिएको ब्याख्याबाट अब यतिबेला हामी कसरी उम्किन पाइन्छ ?,’ उनले भने ।
रिमालले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जाने विषयमा सहमत हुन नसकिने प्रस्ट पारे ।
स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन नभएकाले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको चुनवा एक पटक गर्दा हुने पोखरेलको भनाइ छ ।
‘अहिले संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन बाझिएको छ । संविधानसँग ऐन बाझियो भने ऐन बदर हुन्छ । यो समान्य सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले सबै तहको चुनाव एकै पटक पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समावादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारले पनि तीनै तहको चुनाव एकै चोटी गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
‘मतदान केन्द्र र कर्मचारी बढाउनुपर्छ । चरण÷चरणमा गर्न सकिन्छ । राज्य र राजनीतिक दललाई आर्थिक भार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतदाताले पटक पटक मतदान गर्न जानुपनि पर्दैन । संघ र प्रदेशको एकै पटक गरेकाले स्थानीय तह थप्दा केही फरक पर्दैन ।’
प्रचण्ड–माधवमाथि उठेको नैतिक प्रश्न
ओलीको संसद विघन र निर्वाचन घोषणालाई प्रतिगामी करार गरेको प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनीहरुले फेरि संसद विघटन गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान सकिने प्रस्ताव राखेपछि आलोचना भइरहेको छ । तर माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले उनीहरुको प्रस्तावलाई प्रतिगामी मान्न तयार छैनन् ।
भक्तपुरमा नेमकिपाका सुनिल प्रजापति २५ हजार मतान्तरले विजय